Xilliga duufaanta ee Atlantic waxay yeelan doontaa dhaqdhaqaaq celcelis ah | Saadaasha Shabakadda
Duufaannadu waa ifafaalooyinka saadaasha hawada, oo lagu arko sawirrada dayax gacmeedku, runtii waa kuwo cajiib ah. Laakiin dhulka arrimihiisu way is beddelaan. Waxay sababi karaan dhaawac culus, ilaa heer ay xitaa jiri karaan dhimasho.
Sannadkan, sida ay khubaradu sheegeen, laba iyo toban dabayl-kulul ayaa laga filayaa badweynta Atlantik, kuwaas oo shan ka mid ahi noqon doonaan duufaanno, laba ka mid ahi aad u xoog badan yihiin, xilli dhaqdhaqaaqoodu noqon doono celcelis ahaan. Xilli duufaan oo si rasmi ah u bilaabmaysa 1-da Juun.
Sannadkan sameynta duufaannada waxaa saameyn ku yeelan doona daciifinta dhacdada El Niño iyo heerkulka hoose ee Waqooyiga Atlantik. Cilmi-baare iyo hogaamiyaha mashruuca Colorado State University (CSU) Philip J. Klotzbach ayaa sheegay intii lagu jiray Shirweynihii Cimilada ee Tropical Cimilada ee Koonfurta Padre Island, Texas, inay rajeynayaan isku celcelis suuragalnimada duufaanno waaweyn. sameynta dhulka xeebta Mareykanka iyo Kariibiyaanka. Si aad u sii qeexdo, wuxuu muujiyay inay jirto a 50% suuragalnimada in duufaan ay saameyn doonto xeebta Atlantik ee Mareykanka, iyo 30% fursad ay ku gaari karto Florida ama Gacanka Mexico. Marka la eego Kariibiyaanka, fursadaha ayaa ah a 40%.
Klotzbach iyo kooxdiisaba sanad walba saadaasheeda ayey sameeyaan. Daraasaddan waxaa lagu fuliyaa iyadoo la falanqeynayo 29 sano oo xog taariikhi ah oo ku saabsan duufaannada. Sannadka 2016, waxay saadaalinayaan laba iyo toban dabaylood oo, wadajir, shaqeyn doonaa 50 maalmood. Laba-iyo-tobankan ka mid ah, waxaa jiri doona shan duufaanno noqon doona, oo laba ka mid ahi aad u xoogan yihiin.
Klotzbach oo sii hadlaya ayaa yiri waxay ku filan tahay duufaan inay ku soo dhacdo dhulka si loogu tixgeliyo xilli firfircoon goobtaasiyada oo aan loo eegin inta firfircoon ee duufaantu hore u sii saadaalisay, markaa aad ayey muhiim u tahay in laga feejignaado digniinta cimilada si dhibaatooyinka nooc kasta ha u soo baxaan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Duufaannada » Xilliga duufaanka Atlantic waxay yeelan doontaa dhaqdhaqaaq celcelis ah
Maxay dhulgariirro badani uga dhacaan Ecuador